रमाइलाे संसार - जान्नुहोस् कस्तो भागमा कोठी हुनाले पैसा टिक्दैन ?
अवरुद्ध बीपी राजमार्ग खुल्यो | सात ग्राम ब्राउनसुगरसहित एक पक्राउ | दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय खुला कराँते प्रतियोगिता हुने | विप्लव समूहका भेरी ब्यूरो सदस्य पक्राउ | ‘खाद्यान्न र स्वस्थ जीवनका लागि जैविक विविधता’
जान्नुहोस् कस्तो भागमा कोठी हुनाले पैसा टिक्दैन ?
एजेन्सी । सबै मानिसहरूको शरीरमा काहीँ न काहीँ त पक्कै पनि कोठी हुन्छ र यी कोठीहरुको फरक फरक अर्थ हुने गर्दछ तर शास्त्रका अनुसार शरीरको यस्ता भागहरुमा कोठी भएमा त्यस व्यक्तिसंग कहिले पनि रुपैयाँ नरहने विश्वास गरिन्छ । हेर्नुहोस् यी भागहरु जहाँ कोठी भएमा पैसा टिक्दैन । बायाँ गालामा कोठी जस व्यक्तिको बायाँ गालामा कोठी हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिको आम्दानीको स्रोत बढी नै हुने गर्दछ र रुपैयाँको कमी पनि हुँदैन तर आम्दानी भएता पनि पैसा भने बचाउन सक्दैन र आर्थिक समस्याबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ ।	थप पढ्नुहोस्
बेलायती दरबारमा अमेरिकी ट्वाइलेट, सर्वसाधारणले पनि सुनको चर्पी प्रयोग गर्न पाउने
काठमाडौं । बेलायतको ब्लेनहाइम प्यालेसमा सुनको ट्वाइलेट (कमोड) जडान गरिने भएको छ । बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री विंस्टन चर्चिल जन्मिएको उक्त दरबारको कोठासँगैको कोठामा उक्त सुनको ट्वाइलेट (चर्पी) जडान गरिने भएको छ । द गार्जियनका अनुसार यो कमोड १८ क्यारेट सुनले बन्ने छ । इटालियन कलाकार मौरिजो क्याटिलेनले सो ट्वाइलेटको निर्माण गरेका हुनु । उनकै एकल कला प्रदर्शनीका रुपमा ब्लेनहाइम दरबारमा सो ट्वाइलेट जडान गर्न लागिएको हो । उनको एकल कला प्रदर्शनीमा अन्य विभिन्न कलाकृति समेत रहने भएतापनि सुनको ट्वाइलेट सबैभन्दा विशेष रहने भएकोछ ।	थप पढ्नुहोस्
टोकियो: जापानको एक अस्पतालमा गत अक्टोबरमा जन्मिएको विश्वकै सबैभन्दा कम तौलको बालकलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्न लागिएको जापानी चिकित्सकहरुले बताएका छन् । ती बालक जन्मदा २२ सेन्टिमिटर अग्ला थिए अर्थात् स्याउको आकारका थिए । रिउसुके सेकिया नाम राखिएका ती बालककी आमा तोशिकामा उच्च रक्तचापकी बिरामी थिइन् । चिकित्सकहरुले तोशिकाको २४ हप्ता पाँच दिनको गर्भबाट सफलतापूर्वक सिजेरियन गरी ती बालकलाई जन्म दिएका थिए । गत अक्टोबर १, २०१८ का दिन जन्मेका ती बालकको तौल जन्मदा २५८ ग्राममात्र थियो । जापानमा यो दोस्रो अनौठो घटना हो ।	थप पढ्नुहोस्
अंग्रेजीको रमाईलो ! तपाईँलाई पनि थाहा छ भने थप्दै जाऔँ
काठमाडौं । अध्येता एवम लेखक वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रमणि गौतम (Chandramani Gautam) ले सामाजिक सञ्जालमा अंग्रेजीको रमाईलो ! तपाईँलाई पनि थाहा छ भने थप्दै जाऔँ भन्ने शिर्षकमा धेरै वाक्य लेख्नु भएको छ । जहाँ अंग्रेजी शब्दको अर्थ नेपाली र नेपाली शब्दलाई अंग्रेजी भाषामा के भनिन्छ भनेर स्पष्ट पार्नु भएको छ । अंग्रेजीको रमाईलो (१) ल्याटिन, रोमन र ग्रीक भाषाबाहेक अँग्रेजीमा सबभन्दा बढी शब्द नाटककार विलियम शेक्सपियर एक्लैले घुसाएछन्— १७ सय शब्द ।	थप पढ्नुहोस्
पाँच सय गाडीको ¥यालीसहितको विश्व रेकर्ड
काठमाडौं । भारतमा कुम्भ मेला विषेश गाडीको लामो ¥याली निकालेर विश्व रेकर्ड कायम गरिएको छ । कुम्भ मेला विषेश ५०० बस लगातार सँगै गुडाएर गिनिज बुकमा दर्ता गरिएको अधिकारीहरुले बिहीबार जनाएका छन् । यस अगाडि यसैगरी सबैभन्दा धेरै अर्थात् ३९० ओटा बस लगातार सँगै गुडाएर अबू धाबीमा विश्व रेकर्ड कायम गरिएको थियो । भारतको उत्तर प्रदेश सडक यातायात कर्पोरेसन (युपिएसआरटीसी)ले ती बसहरुलाई ३.२ किलोमिटर सम्म गुडाएको बताइएको छ । युपिएसआरटीसीले सबै राज्यका १८ ओटै क्षेत्रलाई जनशक्तिसहित गाडी पठाउन फेब्रुअरी २७ मा निर्देशन दिएको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
लिङ्ग दर्शन गर्न भक्तपुरमा भीड
“भीमसेन देया लज खङ्गलो वानला ल्याँसे,लिङ्ग दर्शन गर्न भक्तपुरमा भीड बिस्युवाने म्वायक सो झायाला” भक्तपुर । नेवारी भाकाको यो गीतको अर्थ “भीमसेनको लिङ्गले मन लोभियोकी, भाग्नु नपर्ने गरी हेर्न आउनु भयो की” हो । भक्तपुरको दत्तात्रय मन्दिर अगाडिको भीमसेन मन्दिरको पाटीमा एक सातादेखि यो गीत गुञ्जिरहदाँ यहाँ भीमसेनको लिङ्ग दर्शन गर्न आउँनेको उत्तिकै भीड लागेको छ । होली पूर्णिमासम्म हरेक दिन बिहान यसैगरी यो गीत गुञ्जिने गरेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
वैवाहिक जीवन : रिसालु श्रीमतीलाई कसरी सम्हाल्ने ?
काठमाडौं । वैवाहिक जीवनमा उतारचढाव र श्रीमतीको बिचारमा अन्तर हुनु स्वाभाविक हो । कहिलेकाही एक साथी धेरै प्रभावी या डोमिनेटिङ्ग हुन सक्छ । यदि श्रीमानले आफ्नै कुरा मान्नुपर्छ भन्ने सोच्छन् भने श्रीमती चुप रहने प्रयास गरेर सामञ्जस्य बढाउने कोशिस गर्छिन् र यदि श्रीमती कुरा कुरामा बहस गर्छिन् भने घरमा शान्ति बनाइराख्ने भुमिका श्रीमानले निभाउनु पर्छ । कुन कुराले रिसाएको हो, जान्ने कोसिस गर्नुहोस्: श्रीमान-श्रीमतीले एक-अर्काको स्वभाव बुझ्न धेरै आवश्यक हुन्छ । श्रीमती हरेक कुरामा रिसाउदैनन् होला, बिनाकारण कोही पनि रिसाउदैन ।	थप पढ्नुहोस्
विश्वकै पहिलो घटना : जसले सातवटा जीवित शिशु जन्माइन्
काठमाडौ। इराककी एक २५ वर्षीया महिलाले एकैसाथ सात वटा शिशुहरु जन्माएकी छन् । उनले एकैसाथ ६ छोरी र एक छोराको जन्म दिएकी हुन् । विश्वमै यो पहिलो घटना भएको बताइएको छ । पूर्वी इराकको दियाली प्रोविन्सको एक अस्पतालमा ती महिलाले एकैसाथ सात शिशुलाइ जन्म दिएकी हुन् । अस्पतालले जनाए अनुसार ती महिलाको स्वास्थ्यमा क्रमशः सुधार आइरहेको छ भने ती सात वटै बच्चाहरुको स्वास्थ्यवस्थामा पनि सुधार आइरहेको छ । तर अहिलेसम्म सात वटा शिशुको जन्म दिने आमाकाे नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन । स्थानीय स्वास्थ्य विभागका एक प्रवक्ताका अनुसार सबै बच्चा र आमा स्वास्थ्य छन् ।	थप पढ्नुहोस्
भारु १० मा साडी, भिड नियन्त्रण गर्न हम्मेहम्मे
काठमाडौं । भारतको हैदराबादस्थित सिद्दीपेटको एक सपिङ मलले भारु १० मा साडी बिक्री गर्न थालेपछि मलमा महिलाहरुको भीड बढेर भागदौडको अवस्था सिर्जना भएको छ । सीएमआर सपिङ मलमा महिला र किशोरीहरुको ठूलो समूह साडी खरिद गर्न भेला भएको थियो । प्रहरीले सस्तो मूल्यमा साडी बिक्री भइरहेको थाहा पाउनासाथ भीड बढेको र अन्ततः भागदौडको अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ । भागदौड मच्चिदा धेरै महिला घाइते भएका थिए । एक महिलाले आफूले पाँच तोला सुनको गहना, ६०० भारतीय रुपैयाँ र एउटा डेबिट कार्ड हराएको भन्दै प्रहरी समक्ष उजूरी गरेकी छिन् । प्रहरीले उक्त घटनाको छानबिन शुरु गरिसकेको जनाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
तपाईको दाँतको बीचमा खाली भाग छ ? यता हेर्नुहोस
काठमाडौं । सांमुद्रिक शास्त्रका अनुसार जुन मानिसहरुको दाँतको बीचमा खाली भाग हुन्छ उनीहरुको भाग्यफल तथा स्वभाव कस्तो हुन्छ भनेर एक प्रकारको टिप्पणी गरेको छ । शास्त्रको मान्यता अनुसार शरीरको माथिदेखि तलसम्मको शरीरको बनावट हेरेर नै सबै कुराहरु पत्ता लगाउन सकिने बताइएको छ । जस्तै उनीहरुको स्वभाव, चरित्र तथा भुतकाल तथा बर्तमान र भविष्यको अन्दाज लगाउन सकिने बताइएको छ । दांतको बीच भागमा खाली ठाँउ हुने मानिसहरुको भाग्य तथा स्वभाव कस्तो हुन्छ सो कुरा पढ्न सक्नु हुनेछ ।	थप पढ्नुहोस्
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ...
लागुऔषध विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय ...
अमेरिकी थुनामा आप्रवासी बालकको ...
महालेखा परीक्षकको ५६औँ वार्षिक ...
‘विद्युतीय अपराध नियन्त्रणमा ...
कर निर्धारणको बिरुद्ध अजय सुमार्गी, ...
विश्व र्‍याफ्टिङ च्याम्पियनसिपमा ...
अब फेसबुकमा सबैभन्दा माथि ‘बेस्ट ...
देवघाट क्षेत्रमा २७ बिगाहभन्दा बढी ...
प्रधानमन्त्रीलाई रोक्न विप्लव ...